Nalalka Philips Hue mar dambe lama jaan qaadi karaan noocyada kale | Wararka IPhone
Nalalka Philips Hue mar dambe lama jaan qaadi karaan noocyada kale
In muddo ah hadda, nidaamyada iftiinka caqliga ayaa caan noqday, oo noo oggolaanaya inaan beddelno midabka ay naga siiso taleefannadeenna casriga iyadoo loo marayo arjiga laga heli karo App Store. Laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan bedelno xooga iftiinka, la qabsiga xaalada ama daarino ama damino. Nalalka nuucaan ah ayaa noqday kuwa caan ah inkasta oo ay leeyihiin qiimo aad u sarreeya oo ah waxa ay runtii na siiso, in kasta oo ay iska caddahay inay bixiso dhadhanka midabka.
Philips Hue fWaxay ahaayeen guluubyadii ugu horreeyay ee nuucaan ah ee ku dhaca suuqa. Waqti ka dib waxaa jiray soo saarayaal badan oo iyaguna naftooda u huray samaynta nuucaan nuuca casriga ah, taas oo ku qasabtay Philips inuu cusbooneysiiyo qalabka kumbuyuutarka si aysan ula jaan qaadi karin kuwa ay soo saaraan shirkadaha kale.
Inaad aheyn mid raqiis ah, isticmaaleyaal badan oo horey ugu riyaaqay Philips Hue waxay arkeen gacmo furan imaatinka soosaarayaasha kale ee leh nalalka leh wax qabad la mid ah laakiin aad uga jaban laakiin adoo adeegsanaya isla hab maamuuska isgaarsiinta ee Philips ZigBee adeegsado.
ZigBee waa borotokool loogu talagalay in dhammaan demotics-ka internetka ee waxyaabaha ka jira gurigeenna ku wada xiriiraan iyagoo isticmaalaya isla luuqad. Waqtigan xaadirka ah Bosch, Logitech, Samsung, LG, Osram, Comcast ... qaar ka mid ah soosaarayaasha, halkaasoo uu sidoo kale ku yaallo Philips, in kasta oo cusbooneysiintan ay u muuqato inay joojinayso adeegsiga borotokoolkan fududeynaya wada xiriirka aaladaha kala duwan.
Soo saaraha Philips ayaa ku andacoonaya in lagu qasbay inuu cusbooneysiiyo qalabka kumbuyuutarradiisa kororka dhibaatooyinka la xiriira alaabada dhinac saddexaad, taas oo khalkhal gelinaysa macaamiisha. Cusbooneysiintan, ma awoodi doontid inaad xakameyso dhammaan nalalka aan soo saaraha ka ahayn Hue, kuna qasbeysa kuwan soo-saareyaasha saddexaad inay soo saaraan barnaamij cusub ama oggolaadaan inay si wada jir ah u bilaabaan, maadaama ay horay uga faa'iideysteen barnaamijka Philips. isku luqad ah oo lagu wada xiriiro
WAQTIGA: Philips ayaa kaliya ku dhawaaqay inuu sii wadi doono inuu u oggolaado noocyada kale inay sii wadaan inay la shaqeeyaan Philips Hue waxayna dib u laaban doonaan cusbooneysiinta software-ka ee loogu diray qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Nalalka Philips Hue mar dambe lama jaan qaadi karaan noocyada kale
Phillips uun buu saxay oo dib u celiyey.
Waa lagugu sawiray.
Jawaab si skell
Apple waxay isticmaali doontaa 3D Touch shaashadda iPads ka dib iPhone 7
Sida loo isticmaalo akoonno badan oo WhatsApp ah oo ku saabsan iOS-ka oo aan lahayn Jailbreak